DollarOnline စျေး - အွန်လိုင်း DLR ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို DollarOnline (DLR)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ DollarOnline (DLR) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ DollarOnline ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ DollarOnline တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
DollarOnline များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
DollarOnlineDLR သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.507DollarOnlineDLR သို့ ယူရိုEUR€0.43DollarOnlineDLR သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.388DollarOnlineDLR သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.462DollarOnlineDLR သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr4.58DollarOnlineDLR သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.3.2DollarOnlineDLR သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč11.31DollarOnlineDLR သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł1.9DollarOnlineDLR သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.678DollarOnlineDLR သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.708DollarOnlineDLR သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$11.35DollarOnlineDLR သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$3.93DollarOnlineDLR သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$2.76DollarOnlineDLR သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹38.03DollarOnlineDLR သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.85.1DollarOnlineDLR သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.696DollarOnlineDLR သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.768DollarOnlineDLR သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿15.83DollarOnlineDLR သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥3.53DollarOnlineDLR သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥53.68DollarOnlineDLR သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩602.72DollarOnlineDLR သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦191.84DollarOnlineDLR သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽37.36DollarOnlineDLR သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴14.01
DollarOnlineDLR သို့ BitcoinBTC0.00004 DollarOnlineDLR သို့ EthereumETH0.00134 DollarOnlineDLR သို့ LitecoinLTC0.00882 DollarOnlineDLR သို့ DigitalCashDASH0.00522 DollarOnlineDLR သို့ MoneroXMR0.0054 DollarOnlineDLR သို့ NxtNXT36.67 DollarOnlineDLR သို့ Ethereum ClassicETC0.0719 DollarOnlineDLR သို့ DogecoinDOGE145.45 DollarOnlineDLR သို့ ZCashZEC0.0054 DollarOnlineDLR သို့ BitsharesBTS19.92 DollarOnlineDLR သို့ DigiByteDGB18.61 DollarOnlineDLR သို့ RippleXRP1.72 DollarOnlineDLR သို့ BitcoinDarkBTCD0.0174 DollarOnlineDLR သို့ PeerCoinPPC1.74 DollarOnlineDLR သို့ CraigsCoinCRAIG229.65 DollarOnlineDLR သို့ BitstakeXBS21.5 DollarOnlineDLR သို့ PayCoinXPY8.8 DollarOnlineDLR သို့ ProsperCoinPRC63.24 DollarOnlineDLR သို့ YbCoinYBC0.000271 DollarOnlineDLR သို့ DarkKushDANK161.58 DollarOnlineDLR သို့ GiveCoinGIVE1090.68 DollarOnlineDLR သို့ KoboCoinKOBO117.48 DollarOnlineDLR သို့ DarkTokenDT0.467 DollarOnlineDLR သို့ CETUS CoinCETI1454.24